Etu esi wụnye Xposed na gam akporo | Gam akporosis
Etu esi etinye Xposed na gam akporo
Francisco Ruiz | | Nkuzi
N'ime nkuzi nkuzi gam akporo gam akporo ndị a, aga m akuziri gị ụzọ dị mma wụnye Xposed na gam akporo. Nke a n'agbanyeghị ụdị nke gam akporo ị rụnyere na ngwaọrụ gị kemgbe, n'oge ahụ enwere usoro ntinye maka nsụgharị nke Android Lollipop ruo Android M.
Vidio nke anyị ji amalite nkuzi a bara uru, ọbụnadị na-enyere gị aka ịkụziri gị otu esi wụnye Xposed na Android M, Kpọmkwem na Samsung Galaxy S6 Edge Plus nke bụ ama nke onwe m, usoro ntinye bụ nke yiri maka nsụgharị gam akporo niile, naanị ya gbanwere faịlụ Xposed ZIP nke arụnyere site na mgbake gbanwere nke ga-adabere na ụdị nke gam akporo nwere ọnụ arụnyere na Flash Xposed. Yabụ ọ bụrụ na ị na-eche echiche wụnye Xposed Framework na gam akporo gị ọnụ ma ị maghị otu esi eme ya, ana m enye gị ndụmọdụ ka ị ghara ịchefu nkọwa nke post a na vidiyo metụtara nke anyị ji malite isiokwu a.
1 Chọrọ iji nwee ike ịwụnye Xposed na gam akporo
2 Faịlụ dị mkpa iji wụnye Xposed na gam akporo
3 Xposed nwụnye usoro na Android nzọụkwụ site nzọụkwụ
Chọrọ iji nwee ike ịwụnye Xposed na gam akporo
Iji nwee ike wụnye Xposed na gam akporo ma nwee ike ịnụ ụtọ nhazi niile nke nbudata na ntinye nke modulu na-enye anyị, ha na-ezute ihe ndị a dị mkpa:
Nwee mgbọrọgwụ gam akporo.
Nwee Mgbake gbanwere nke ọma na emelitere ya kacha ọhụrụ mbipute dị.
Nwee nandroid ndabere, ndabere dum sistemụ si gbanwetụrụ Recovery. Nke a nwere ike bụrụ na anyị nwere nsogbu na ngwanrọ na-ekwekọghị ekwekọ iji nwee ike iweghachite ọnụ dị ka ọ dị tupu e tinye usoro modul a.
Soro usoro nwụnye m na-akọwa na vidiyo metụtara nke anyị ji bido post a.
Faịlụ dị mkpa iji wụnye Xposed na gam akporo
Iji wụnye Xposed na gam akporo, n'agbanyeghị ụdị nke gam akporo anyị rụnyere, ọ ga-adị anyị mkpa ibudata nke kachasị ọhụrụ nke Xposed Installer, gbakwunye na nbudata nke Xposed ZIP kwekọrọ na mbipute anyị nke gam akporo.
Ndị a bụ njikọ kpọmkwem iji budata Xposed Installer APK na nsụgharị kachasị ọhụrụ ya, yana njikọ iji budata faịlụ ZIP dị mkpa dịka ụdị gam akporo gị:
Xposed Installer ngwa. (Nke a bụ ngwa m wụnye mbụ na vidiyo ma ọ dị irè maka ụdị ọ bụla nke gam akporo).
Site na ibe a ị nwere ohere ibudata nbudata nke faịlụ Xposed ZIP kwekọrọ na nsụgharị nke Android 5.0, Android 5.1 na Android 6.0. Lee njikọ ndị kwekọrọ na ya maka ụdị nke gam akporo ọ bụla a kpọtụrụ aha:
Budata Xposed Framework SDK 21 maka nsụgharị nke gam akporo 5.0.
Budata Xposed Framework SDK 22 maka nsụgharị nke gam akporo 5.1.
Budata Xposed Framework SDK 23 maka nsụgharị nke Gam akporo 6.0.
I nwekwara ike budata unnistaler Xposed faịlụ site na otu njikọ a. Nke a ZIP faịlụ dị irè maka ụdị ọ bụla nke gam akporo ma dị faịlụ dị mkpa ma ọ bụrụ na otu ụbọchị anyị chọrọ iwepụ Xposed na gam akporo anyị.
Ozugbo ebudatara faịlụ abụọ a, faịlụ apk tinyere faịlụ ZIP kwekọrọ na mbipute anyị nke gam akporo, anyị ga-e copyomi ha na ebe nchekwa dị n'ime ngwaọrụ gam akporo anyị ma anyị ga-aga n'ihu na usoro ntinye na Flashing of Xposed in Android.
Xposed nwụnye usoro na Android nzọụkwụ site nzọụkwụ
Dị ka m na-agwa gị na vidiyo agbakwunyere nke anyị malitere post a, m na-egosi gị usoro ntinye na nchapu nke Xposed na Android site na nzọụkwụ, usoro a na-ejedebe ịgbaso usoro ndị a dị mfe:
Anyị na-etinye ngwa ebudatara dị ka anyị ga-etinye ngwa ọ bụla na usoro APK. Iji mee nke a, anyị ga-akpa nwee ike site na Ntọala gam akporo na ngalaba Nche, nhọrọ nke na-enye anyị ohere ịwụnye ngwa site na isi mmalite ma obu nke amaghi ama. Mgbe ahụ ihe niile ị ga - eme bụ pịa na faịlụ APK n'onwe ya maka ntinye Xposed Installer ka ịmalite.
Mgbe ị wụnye ngwa Xposed Installer, ngwa nke anyị ga-etinye ma wepu modulu Xposed, Anyị ga-Malitegharịa ekwentị na Iweghachite na ọnọdụ na site na nhọrọ wụnye, Anyị ga-ahọrọ ZIP kwekọrọ na nke anyị ugbu a nke gam akporo na anyị ga-eme ya.
Reboot System Ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Etu esi etinye Xposed na gam akporo
Nnọọ !!! Enwerem doogee hotmtomht17pro with arm64 ibe n'iji m gbalịrị niile zips na ihuenyo bụ nwa mgbe emelite ngwa. Amaghim ihe m g’eme, i g’enyere m aka.
Zaghachi juan carlos
Huawei's EMUI 5.0 Layer Custom iji nweta ihe okike buru ibu maka ọdịda
Samsung Ndị okike na-achọ ndị na-ese ihe nkiri na ndị okike iji mepụta ọdịnaya maka VR